Nin 20 jir ah ah oo loo soo qabtay falkii lugu gubay masaajid ku yaala Örebro | Somaliska
Nin 20 jir ah ah oo loo soo qabtay falkii lugu gubay masaajid ku yaala Örebro
Masaajid ku yaala xaafadda Vivalla ee magaalada Örebro ee dalkaan Iswiidhan ayaa habeenimadii xalay aheyd waxaa la qabasadsiiyey dab. Falkan ayaa booliska magaaladaasi waxaa ay sheegteen in ay u soo qabteen wiil labaatan jir ah oo lugu tuhmayo in uu ka dambeeyey.
“Waxaan Örebro ku qabaney nin dhashey sanadkii 1997-dii, kaas oo loo heeysto inuu ka danbeeyey falkaasi lugu doonayey in lugu dilo dadyow la rabay in la dilo, mana ii muuqato wax cadeeyn ah in falka lagu gubey masaajidka ay ka danbeeyso ujeedo siyaasadeed ama mid diimeed” sidaas waxaa yiri, Bo Andersson oo ah taliyaha ciidamada booliiska magaaladaasi Örebro.
Masaajidka xaafadda ajaanibtu ku badan tahay ee Vivalla, ayaa waxaa dab la qabasiiyey xalay saqdii dhexe abaarihii labadii habeenimo, waxaana uu baabi’iyey kala bar dhismihii masaajidkaas. Booliskana waxaa ay sheegeen in ay runsan yihiin in falkani ahaa mid lugu doonayey in lugu dillo dad si ula kac ahina dab loogu qabtay.
Gabar Soomaali ah oo Islaamka ka baxday ka dibna sheegtay in Muslimiintu weerar ku hayaan [Video]
KANADA: Nin soomaali ah oo falal ammaan darri ah maxkamad loo soo taagayo
Nin Muslim ah oo shaqada lagu cunsuriyeeyay